MM Itoophiyaa Badhaasa Noobeelii Nagaa injifatan - BBC Afaan Oromoo
MM Itoophiyaa Badhaasa Noobeelii Nagaa injifatan
10 Oct 2019 01:0010 Oct 2019 01:00
Tilmaamonni MM Abiy injifachuu akka danda'an himan hedduun turaniiru
...tti maxxanfame 13:06 11 Onkololeessa13:06 11 Onkololeessa
MM Abiy Ahimad Badhaasa Nagaa Noobeelii fudhachuun nama Afrikaa 12ffaa ta'an
Ministirri Mummee Abiy Ahimad Badhaasa Nagaa Noobeelii fudhachuun nama Afrikaa isa 12ffaati
Badhaasi kuni al 100 badhaafameera- namoota 107 fi dhaabota 27
Namooti Afrikaabadhaasa kana mo’atan:
•2018-Deenis Mukweegee- Dimookiraatiik Riippaaliikii Koongoo
•2015- Dhaabbata- National Dialogue Quartet-Tuuniziyaa
•2011-Eleen Joohonsan Sarliif fi Leymaah Gibowee-Laayibeeriyaa
•2005-Mohaamad El Baaraadii-Masrii
•1993-Neelsan Maandeellaa fi FW Dii Kileerk-Afrikaa Kibbaa
•1984-Dezmoond Tuutuu-Afrikaa Kibbaa
•1978- Anwaar al Saadaat- Masrii
•1960-Albart Lutulii-Afrikaa Kibbaa
Maatiin Abiy Ahimad (PhD) maal jedhan?
Obboleessii MM Abiy Jimmatti argaman Faantuu Ahimad Alii oduu injifachuu badhaasa Noobeelii Nagaa obboleessa isaan kan dhagahan wayita BBC miira isaanitti dhagaahame gaafachuuf bilbilaan dubbisu ta’uus, erga dhagahanii gammachuu guddaan akka itti dhagaahame ibsaniiru.
‘’Durumaa jalqabee nagaa buusuun kennaa isaaniitii’’ jedhan.
Hiriyyaa Ijoollummaa MM Abiy Ahimad kan turan obbo Muftaahuddin ''badhaasichi bareechee isaaniif mala'' jedhan
“Ani hin dhageenye ture. Ani baay’ee baay’ee natti dhagahama. Gammachuu guddaatu natti dhagahama.''
Gammachuun natti dhagahu immoo hojiisaaniiti. Hojiin isaanii hojii humnaa oliiti. Badhaasaa kanaa olitti badhaafamuu kan qabanuudhaa, osoo namni tokko jidduu hin galiin akka kanatti Itiyooo-Eeritiraaf araara buusanii…achii ka’anii immoo namoota aara galfachiisanii waraana naannoo kana jiru; waraana achirra jiru lachanuu bu’aa galfachiisuudhan jechuu baay’ee baay’ee gammachuu guddaatu natti dhagahama ani isa dhugumaa.” Jedhaniiru.
Badhaasni Noobeelii kun bareechee bareechee isaanii mala. Kun gammachuu keenya hundaati jedhaniiru hirriyaan ijoollummaa obbo Miftaahufdin.
...tti maxxanfame 11:54 11 Onkololeessa11:54 11 Onkololeessa
Pirezidaantiin Saahilawarqi Zawude MM fi uummata biyyattiin baga gammadan jedhan
Pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilawarqi Zawude MM fi ummata biyyattiin baga gammadan jedhan
Pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilawarqi Zawude MM Abiy badhaasa Nobeelii 2019 mo’achuu isaanitti baga gammaddan jedhaniiru.
Erga fuula tiwiitari isaanirratti barreessaniin, ‘Ministirra MM baga gammaddee! Biyya keenya Itoophiyaas bagagammaadde!
Akkasumas lammiileen biyyaattii keessa goolee arfan jiraattaniifi lammiilee biyya heebbifamtu tanaa addunyaa gutuutti argamtan baga gammadan jettee jirti!
...tti maxxanfame 11:47 11 Onkololeessa11:47 11 Onkololeessa
'Badhaasichi Itoophiyaaf, Afrikaaf kan kennamedha': MM Abiy Ahimad
Barreessaa Koree Noobelii Noorway Olav Njolstand akkuma badhaasa ‘Nobel Peace Prize’ mo’achuun isaanii beeksifameen Ministira Muummee Abiy Ahimad waliin haasawaa bilbilaan taasiseera.
Badhaasa kanaaf galata qabdu jechuun, yeroo oduu kana dhaga’uttis gammaduu dubbatan Dr. Abiy “Badhaasni kun kan Itoophiyaadha.
Gaggeessitoonni Afrikaa yaada qajeelaan fudhatanii hangama akka nagaaf hojjechuu danda’an kanarraa kaanee yaaduu ni dandeenya kan jedhan MM Abiy.
...tti maxxanfame 11:44 11 Onkololeessa11:44 11 Onkololeessa
'Galata qabsoo Oromoo, kan achiin isa gahe'
"Galaanni qabsoo Oromoo achiin isa geenyaan innis cimee milkii kanaan gahe hedduu itti gammadna," Abbaa Nagaa Jaarraa.
Namni biyya isaa keessatti waan gaarii dalagee, daandii ifa ta’een deemu addunyaarrattis ta’ee biyya keessatti kabajamuun waanuma jiru. Ani kana akka gaarittan ilaala jedhan Abbaa Nagaa Jaarraa.
Badhaasni kunis kan agarsiisu Dr. Abiy ilaalchi inni biyya isaatiif qabu gaarii ta’uu, rakkoo biyya kanaas akkuma to’achaa jiru, jijjiirama kanas haala gaariidhaan deemsisaa jiraachuu kan agarsiisudhaas jedhan.
“Badhaasni kun waan akka nama tokko qofaatti ilaalamu osoo hin taane akka biyyaattis ilaalamuu qaba. Akka ummata inni keessaa baheettis ilaalamuu qaba. Kuni guddinaafi jijjiirama jennee amanna,” jedhan.
Dr. Abiy badhaasa Noobeelii Nagaa kana injifachuun isaanii ummata inni keessaa bahe ummata Oromootiifis kabaja guddaa ta’uu eeran. “ Kabajni kun qabsoo Oromootiin waan dhufedha".
Ummata Oromootiif dhageettii guddaa, seenaa biyya kanaatiifis waan gaarii uuma jedheen ilaala.
"Galaanni Qabsoo Oromoo erga fuudhee isa achiin gahee innis milkii kana waan fideef galata qabnaaf. Ummata keenya kan wareega hedduu baasee asiin gahefis galata qabna, hedduus itti gammadna kun waan gaariidha,” jedhan.
...tti maxxanfame 11:13 11 Onkololeessa11:13 11 Onkololeessa
Antooniyoo Guteereez MM Abiyiin baga gammadde jedhan
Barreessaan Ol-aanaa Biyyoota Gamtooomanii Antooniyoo Guteereez ergaa baga gamaddanii MM Abiy Ahimadiif darbarsaniiru.
Guteereez ergaa badhaasicha ilaalchisuun dabarsaniin, mul’anni ministira muummichaa Itoophiyaa fi Ertiraan waliigaltee seena qabeessa kanarra akka ga’aniif dandeessiseera jedhaniiru.
Akkasumallee gaggeessummaa isaaniitiin biyyoota Afrikaa biroodhaaf akkasumas gaggeessitoota Afrikaan ala jiraniifis fakkeenya ajaa’ibaa ta’uu danda’aniiru jedhan Barreessaan Ol-aanaa Biyyoota Gamtoomanii kun.
...tti maxxanfame 10:49 11 Onkololeessa10:49 11 Onkololeessa
'Oromoo keessaa nama jalqabaa badhaasa kana argate ta’uutti guddaan gammade'
Itoophiyaa keessaa Oromoorraa nama jalqabaa badhaasa kana argate ta’uutti guddaan gammade, Obbo Yonaatan Dhibbisaa.
Dr Abiyyi biyya keessatti nagaa buusee, hidhamtoota biyyoota adda addaa keessa jiran nagaan biyyatti galche. Aniyyuu warra sababa isaatin biyyatti deebiedha.
Badhaasni kuni isaaniif nimala jedhan Obbo Yonaatan. Dhimma eertiraa fi sudaan akkasumas gaanfa Afrikaatti hojii boonsaa nama hojjetaniidhas jedhan.
Erga kaadhimummaan dhihaatanirraa kaasee haalan hordofaa turuu fi akka injifatan tilmaama qabaachuus himaniiru.
Oromoo keessaa namni cimaan beekamtii idil addunyaa akkanaa argachuun gammachuu guddaa akka isaaniitti uumes BBCtti himan.
Waajira MMCopyright: Waajira MM
...tti maxxanfame 10:40 11 Onkololeessa10:40 11 Onkololeessa
Badhaasichi MM Abiy hojiilee riiformii caalaa kakaasu qabata: Amanastii Intarnaashinaal
Dhaabbanni marga namoomaaf falmu Amanistii Intarnaashinaal, badhaasni Noobeelii Nagaa kun MM Abiya Ahimad mirga namoomaa eegsisuuf caalaatti isaan kakaasuu qaba jedhe.
Barreessaan dhaabbatichaa Kumii Naayidoo, badhaasa Noobeelii Nagaa 2019 MM Abiya Ahimad moo’uun ibsamee booda ibsa baasaniin: ‘’Badhaasni kun hojii Abiy Ahimad mirgoota namoomaa waggoota hedduuf dhiitamaa turan sirreessuuf hojjataniif beekamtii kan kennudha’’ jedhaniiru.
‘’Erga angoo qabatanii as, qaamolee nageenyaa riifoorm gochuu, Eertiraa waliin araara buusuufi Sudaan keessatti qaamolee wal-dhaban jaarsummaa taa’uun nagaa buusuu danda’ee jira’’.
Haa ta'u malees, ‘’MM Abiy Ahimad hojiiwwan heeduutu fuuldura isaa jira.''
Ta'us ammoo badhaasni kuni injifannoowwan amma yoonaa argate wantoota fashaleessuu danda’an sirreessuuf caalaatti isa kakaasa’’ jedhaniiru.
‘’Wal-dhabdee saboota gidduutti mul’achaa jiru mootummaan isaanii dafee fala gochuufii qaba, seera shororkeessummaa namoota shakkaman ittiin dararuuf hojiirra oolaa jiru fakkaatus dafee sirreessuu qaba’’ jedhaniiru.
...tti maxxanfame 10:33 11 Onkololeessa10:33 11 Onkololeessa
Badhaasa Noobeelii Nagaa injifachu isaaniif maaltu gumaache?
MM Abiy Ahimad biyya ollaa Eertiraa waliin nageenyaa buusuu isaaniitiif badhaasa Noobeelii Nageenyaa bara 2019 badhafaman.
Biyyoonni lamaan osoo MM Abiy gara aangootti hin dhufiin dura waggoota 20 oliif daangaarratti wal waraana erga taasisanii booda wal gaarreeffataa turan.
Koreen Noobeelii warra Noorweey MM Abiy nageenya isaanii Eertiraa waliin fidan qofaaf miti kan jajaniin, riiformii isaan biyyatti keessatti fidan dabalata.
MM hidhamtoota siyaasaa, paartileen mormitu karaa naga qabeessan akka biyya galaniifi miidiyaaleenis bilisummaan akka socha’uu danda’an Amineestiidhaaf waadaa galanii turan.
Hojiin isaan rakkinna siyaasaa Suudan keessa ture furmaata waaraa fiduuf hojjattan badhaasaa kana akka argatan isaan taasiseera.
Namoonni muraasni garuu adeemsa kana ni qeequ. Akkuma Koreen Noobeeliin waan kana tuquuf yaaletti ammas ta’u rakkooleen hedduu Itoophiyaa keessatti hin furamne akka jiran ibsaniiru.
Obbo Shimmallis Abdiisaa baga gammadan jedhan
Pireezedaantii Itti aanaan MNO Obbo Shimmallis Abdiisaa Ministirri Muummee Dr. Abiyyi Ahimad badhaasa Noobeelii Nageenyaa bara Faranjootaa 2019 injifachusaaniif Ummata Itoophiyaa maraan baga gammaddan jedhaniiru.
...tti maxxanfame 10:15 11 Onkololeessa10:15 11 Onkololeessa
Ergaan baga gammaaddanii MM Abiyiif Raayilaa Odingaa irraa
Keenyaatti nama siyaasaa beekamaa kan ta’an Raayilaa Odingaa, MM Abiy Ahimad badhaasa Noobeelii Nagaa mo’achuu isaaniitiif baga gammadde jedhan.
Abboota siyaasaa bebbeekamoo keessaa Keenyaatti garee morkataa guddaa kan ta’an Raayilaa Odingaa, ergaa baga gammaddee fuula tiwiitar isaaniirratti barreessanitti, “Rakkoo walitti bu’insa daangaa biyya ollaa Eertiraa waliin ture karaa nagaa furuuf hojii milka’aa hojjetaniif ‘Nobel Peace Prize’ bara kanaa badhaafamuu keessaniif baga gammaddan.
Badhaasni MM Abiy argatan kunis ardii Afriikaa waraanni duubatti harkifataa turteef kabajadha,” jedhan
MM Abiy waliin eenyuu fa’itu badhaasichaaf kaadhimamee ture?
MM Abiy waliin eenyuu fa’itu badhaasichaaf tilmaama argatee ture?
Walumaa galatti kaadhimamtoonni 301 badhaasa olaanaa kanaaf kan kaadhimaman yoo ta’u, isaan keessaayis 223 namoota dhuunfaa, 78 ammoo dhaabbilee ta’u barameera.
Lammii Siwiindiin kan taate shamarree umurii waggaa 16 fi falmituun jijjirama qilleensaa mormuun kan beekamte, Gireetaa Tanbargiif tilmaamni olaanaan kennameefii ture.
Haa ta’u malee MM Abiy dorgomicha mo'achuun badhaafamaa Noobelii 100ffaa ta’u danda’aniiru.
Badhaansi Nobeelii kunis waggaa waggaan dameewwan Shan fiziiksii, Kemstirii, wallaansaa fi ogbarruutiin kennama.
Keessumaayyu badhaasichi kan kennamu namoota baatiiwwan 12 darban keessatti hojiiwwan ilmaan namaaf kabaja kennan kanneen hojjataniifiidha.
Haaluma kannaanis MM Abiy wal dhabdee itoophiyaafi Eeritiraa jidduu waggoota 20 oliif ture karaa nagaatii furmaata akka argatu taasisuufi akkasumas walitti dhufeenyi biyyoota gaanfa afriikaa jidduutti akka jimu gumaataolaanaa taasisaniin filatamusaanii barameera.
Badhaa kanaanis doolaara kuma 900 kan argatan yoo ta’u, baatii Muddee dhufaa Osilootti badhaasa isaanii akka fudhatan eegama.
...tti maxxanfame 9:52 11 Onkololeessa9:52 11 Onkololeessa
Waajjirri MM injifannoo badhaasa Noobeelii nagaa lkanaaf gammachu itti dhagahame ibse
Waajjirri MM Dr Abiy Ahimad Badhaasa Noobeelii Nagaa kan bara 2019 injifachuu isaaniitiin gammachuu itti dhaga’ame ibsuu barbaada. Beekamtiin isaan argatan falaasama “Ida’amuu’ geggeessaniif raga yeroo ce’udha.
Erga bara 2018 angoo siyaasaa argatanii booda, nagaa, waliif dhiisuufi araarama bu’uura bulchiinsa isaanii taasisuun hojjachaa turani. Namoonni kumaatama hedduun lakkaa’aman hidhaarraa gadhiifamuun, miidiyaaleen bilisummaa akka argatan gochuu, paartileen siyaasaa baqatanii turan deebi’anii akka nagana siyaasarratti hrmaataniif dirree bal’isuu, gareewwan wal-dhabanii turan (kan akka dhaabbilee amantaa) akka araaraman taasisuun hojiilee mul’atan keessaa muraasa.
Eertiraa waliin waggoota 20 booda araarri akka bu’u taasisuun carraawwan gargaraa akka uumaman taasiseera. Maatiiwwaniifi firoonni yeroo dheeraaf gargar ba’anii turan akka wal argan taasisee jira.
MM Abiy falaasama Ida’amuutiin nageenya naannichaa irratti shoora guddaa taphachaa jiru. Kunis Sudaanitti araarri akka bu’u taasisuun firii buuseera.
Hara addunyaan gumaacha isaanii kanaaf karaa Badhaasa Noobeelii Nagaatiin beekamtii kennuun wayita gammadaa jirutti, lammiileefi michuuwwan Itoophiyaa hundi nageenya cinaa akka dhaabbatan isaan affeerra.
Kuni Itoophiyaanotaaf injifannoo waliigalaati, Itoophiyaa haaraafi badhaatuu taate uumuuf caalaatti kan nukakaasudha.
...tti maxxanfame 9:42 11 Onkololeessa9:42 11 Onkololeessa
MM Abiy Ahimad badhaasa Noobeelii Nagaa bara 2019 injifatan
Koreen badhaasa Noobeelii Noorweey MM Abiy Ahimad badhaasa Noobeeli nagaa bara 2019 injifachuu beeksise.MM Abiy Ahimad waranaan Itoophiyaafi Eertiraa waggaa 20 ture fi lubbuu namoota 70,000 ol ta’u gama lamaniinuu galaafee, nagaan akka xumuramu gahee bahaniif badhaasni kun akka kennamef koreen kun beeksiseera.Akkasumas hojiilee rifoormii erga aangoo qabatanii hojjetaniifi naannoo gaanfa Afrikaatti nagaan akka dhufu hojiilee gurguddoo hojjechuu isaaniif akka mo'atan dura teessuun koree badhaasa kanaa dubbataniiru.